Xildhibaano Badan Oo Jamhuuriya Oo Taageeray Xil Ka qaadista Trump – Heemaal News Network
Xubnaha Aqalka Wakiillada oo ay aqlabiyaddiisu leeyihiin Dimoqraadiyiinta ayaa xil-ka xayuubinta Donald Trump u adeegsan doona qodobka ‘Hurin Rabshado’ kaddib marki Arbacadi hore ay taageerayaashiisa xoog ku galeen xarunta Koongareeska.
Dhanka kale, shan mudane oo Jamhuuri ah oo ka tirsan Aqalka Wakiillada ayaa Talaadadi shalay ku dhawaaqay in ay taageersanyihiin in madaxweynaha Jamhuriga ah xilka laga qaado.
Mudanayaashan ayaa waxaa ugu caansan, haweeneyda la yiraahdo Liz Cheney oo laga soo doorto gobolka Wyoming. Liz ayaa ah qofka saddexaad ee ugu darajada sareeya xildhibaannada Jamhuuriga u matala Aqalka Wakiillada. “madaxweyne Maraykan ahi waligii ma khayaamin dastuurka, kan ka hor, waxaan u codayn doonaa in xilka laga qaado”.
Adam Kinzinger, oo laga soo doorto Illinois, ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu rumeysan yahay in Trump uu jabiyay dhaartii uu qaaday markii loo dhaariyay xilka Madaxweynaha Mareykanka.
Wuxuu u adeegsaday booskiisa fulinta inuu ku weeraro golaha sharci dejinta, ayuu qoray, isaga oo tixraacaya eedeymaha ah in Trump uu kiciyay kacdoon lagu hoobtay oo ka dhan ah Koongaraska, wuxuuna sheegay in uu u codaynaayo in xilka laga qaado.
John Katko ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri “U ogolaashada Madaxweynaha Mareykanka inuu kiciyo weerarkaan cawaaqib xumo iyo waxay khatar toos ah ku tahay mustaqbalka dimuqraadiyadeena.”
– Ma fadhiisan karo oo ma daawan karo ficil la’aan. Waxaan u codeyn doonaa in madaxweynahan la xilka laga qaado, ayuu raaciyay.